Yeremia 47 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Nkɔmhyɛ a etia Filistifo (1-7)
47 Yehowa asɛm a ɛbaa odiyifo Yeremia nkyɛn ansa na Farao resɛe Gasa no ni. Ɛfa Filistifo ho.+ 2 Nea Yehowa aka ni: “Hwɛ! Nsu fi atifi fam reba. Ebeyiri abu afa so. Ebeyiri afa asaase no ne nea ɛwɔ so nyinaa,Kurow no ne wɔn a wɔtete mu nyinaa. Mmarima bɛteɛteɛm,Na obiara a ɔte asaase no so besu ateɛteɛm. 3 Sɛ wɔte n’apɔnkɔ* nan a ɛrepempem fam kim-kim-kim,Ne ne ko nteaseɛnam a ɛreyɛ kiri-kiri-kiri,Ne ne nteaseɛnam no nan a ɛretwa ne ho kiridi-kiridi-kiridi no a,Agyanom rentwa wɔn ani mpo nhwɛ wɔn mma,Wɔn nsam a agow nti. 4 Efisɛ ɛda a ɛreba no bɛsɛe Filistifo nyinaa;+Ebetwitwa Tiro+ ne Sidon+ aboafo a aka nyinaa. Na Yehowa bɛsɛe Filistifo no,Wɔn a wɔaka a wofi Kaftor*+ supɔw so no. 5 Gasa ti so bɛpa.* Wɔama Askelon aka n’ano atom.+ O mo a moaka wɔ n’asaasetraa so,*Mode ade betwitwa mo ho akosi da bɛn?+ 6 Ao! Yehowa sekan!+ Da bɛn na wobɛyɛ dinn? San kɔhyɛ wo bɔha* mu. Home, na yɛ komm. 7 Ɛbɛyɛ dɛn ayɛ dinn,Bere a Yehowa na ahyɛ no? Ɛreba Askelon ne mpoano asaase no so.+Ɛhɔ na wahyɛ sɛ ɛmmra.”
^ Anaa “n’apɔnkɔnini.”
^ Kyerɛ sɛ, Kreta.
^ Kyerɛ sɛ, wɔde awerɛhow ne aniwu beyi wɔn ti nwi.
^ Anaa “wɔ ne bon mu.”